မည်သည့်ပန်းကန်ကိုမဆို အဆီလောင်ကျွမ်းစေမည့် လှည့်ကွက်ကို ရှာဖွေပါ | Bezzia
မည်သည့်ပန်းကန်ကိုမဆို အဆီလောင်ကျွမ်းစေမည့် လှည့်ကွက်ကို ရှာဖွေပါ။
တောရက်စ် | 11/01/2022 20:00 | နေထိုင်စရိတ်, အစာအာဟာရ
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက် ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုနှင့်အတူ ကယ်လိုရီလိုငွေပြရန် လိုအပ်သည်။ အခြားတစ်ခုမပါဘဲတစ်ခုကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ တိကျသေချာပြီး ကျန်းမာတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ချတာက နှစ်ခုလုံးရဲ့ပေါင်းလဒ်ကိုဖြတ်သန်းပါတယ်။ ယခုလည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင် Dieting သည် သင့်ကိုယ်သင် ငတ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။အားကစားလုပ်ခြင်းသည် နေ့တိုင်း နာရီပေါင်းများစွာ လေ့ကျင့်မှုကို အဆုံးစီရင်ရန် မဆိုလိုပါ။
သိထားသင့်တာက ထိရောက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းက အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ သင့်အစားအစာများတွင် အချို့သောအစားအစာများပါ၀င်သည့်အပြင်၊ ၎င်းသည် မည်သည့်ပန်းကန်ကိုမဆို အဆီလောင်ကျွမ်းစေသည့်ပုံစံအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ အစားအစာတွေ ရှိနေလို့ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ သူတို့ကို အသုံးပြုမယ်။. မင်းရဲ့ပန်းတိုင်တွေကို အောင်မြင်အောင် ကူညီပေးမယ့် မဟာမိတ်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ သိချင်ပါသလား။
1 မည်သည့်ပန်းကန်ကို အဆီလောင်ကျွမ်းစေသည့်နည်းသို့ ပြောင်းလဲမည်နည်း။
1.1 ဟင်းလျာများထဲသို့ ဂျင်းအမြစ်ထည့်ပါ။
1.3 သင့်ခေါက်ဆွဲချက်ပြုတ်နည်းများတွင် ပုဇွန်ထည့်ပါ။
1.4 သင့်ပန်းကန်များကို အဆီလောင်ကျွမ်းစေသော ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များဖြင့် ချက်ပါ။
မည်သည့်ပန်းကန်ကို အဆီလောင်ကျွမ်းစေသည့်နည်းသို့ ပြောင်းလဲမည်နည်း။
အချို့သော အစားအစာများတွင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အပူချိန်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဓာတုပစ္စည်းများ ပါဝင်ပြီး အထူးသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်အတွင်း အဆီများကို လောင်ကျွမ်းစေပါသည်။ အခြားအရာများ ကဲ့သို့သော ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။, ဥပမာ။ ဤအရာများသည် အစားအစာထဲတွင် သဘာဝအတိုင်း ရှိနေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်သည် ၎င်းတို့ကို သင့်အစားအစာများတွင် ပုံမှန်ထည့်သွင်းပါက၊ သင်သည် မည်သည့်ပန်းကန်ကိုမဆို အဆီလောင်ကျွမ်းစေသည့်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၏အမြစ် ဂျင်း ၎င်း၏ များပြားလှသော ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အကျိုးရှိသောကြောင့် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် အစွမ်းထက်ပါသည်။ ဤအရာသည် ဤအရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် အပူချိန်များသော သက်ရောက်မှုရှိသော အစားအစာများဆိုလိုချင်တာက ဂျင်းကို အစားအစာတွေမှာ ထည့်စားရင် အဆီပိုတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ထိရောက်စွာ လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဂျင်းသည် ငရုတ်သီးကဲ့သို့သော အခြားသော အစားအစာများကဲ့သို့ပင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို တိုးစေပြီး အဆီလောင်ကျွမ်းစေပါသည်။
ဂျင်းကို သင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက် သန့်စင်ရည်နှင့် ခရင်မ်များထဲသို့ ထည့်ပြီး၊ သင့်အတွက် ရွေးချယ်စရာများစွာ ရှိပါလိမ့်မည်။ အဆီကျစေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ညစာတွေစားပါ။ သတိတောင်မထားမိဘူး။ အစပ်ကြိုက်ရင် နနွင်း (သို့) ငရုတ်သီးအနည်းငယ် ကဲ့သို့သော အာနိသင်ကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများကိုလည်း တိုးနိုင်ပါတယ်။
ရှာလကာရည်သည်လည်း အစွမ်းထက်သော အဆီလောင်ကျွမ်းစေသည့် အာနိသင်ရှိပြီး ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချလိုသူတိုင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော မဟာမိတ်ဖြစ်သည်။ ဤအစွမ်းထက်ပစ္စည်း အဆီသိုက်များကို လျှော့ချပေးသည်။ ဒါမှ အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားနိုင်မှာပါ။ နေ့တိုင်း ရှာလကာရည်နဲ့ အသုပ်စားပါ၊ ပဲပင်ကိုအခြေခံပြီး အစိမ်းရောင်အသုပ်တွေနဲ့ တခြားအသုပ်တွေကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံသော အစားအစာကို အဆီလောင်ကျွမ်းစေသော ဟင်းလျာအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါမည်။
ငရုပ်သီးအနည်းငယ်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ပုဇွန်များသည် ထောပတ်သီးတိုင်းအတွက် အစွမ်းထက်သော အဆီလောင်ကျွမ်းစေသည့်အပြင် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဒါကဘာလို့လဲ။ ငရုပ်သီး၏ အပူချိန်ကို ထိန်းညှိပေးသော ပုစွန်ပရိုတင်းဓာတ်များအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ အဆီလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ အာနိသင်ကို ဖန်တီးပါ။ သံပုရာသီးတစ်ခြမ်းထည့်ရင် အသည်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ကောင်းမွန်စေပါလိမ့်မယ်။
သင့်ပန်းကန်များကို အဆီလောင်ကျွမ်းစေသော ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များဖြင့် ချက်ပါ။
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များစွာသည် အပူချိန်ကို ထိန်းညှိပေးသော အာနိသင်ရှိပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို တိုးမြင့်စေပြီး ဒေသအလိုက် အဆီများကို လောင်ကျွမ်းစေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များသည် ကယ်လိုရီမထည့်ဘဲ အရသာပိုရှိသော ဟင်းလျာများကို ခံစားနိုင်စေပြီး ဆိုဒီယမ်စားသုံးမှုကိုလည်း လျှော့ချပေးသည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နှစ်သက်ဖွယ်အရှိဆုံး ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အချို့မှာ ဟင်း၊ မုန်ညင်း၊ နနွင်း သို့မဟုတ် cayenne.
အစားအသောက်ကို ပေါင်းစပ်ဖို့ သင်ယူခြင်းဟာ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချစဉ်မှာ အရာအားလုံးကို ကျန်းမာတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ စားသုံးနိုင်ဖို့ သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗိုက်ဆာခြင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ အစာစားရန် သင်ယူခြင်း၊ လိုအပ်သောအာဟာရများ ကျွေးမွေးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါမှ ခန္ဓာကိုယ် ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နိုင်မှာပါ။. အချမ်းသာဆုံးအစားအစာများသည် သဘာဝအရှိဆုံးဖြစ်သောကြောင့် အစားအစာ၊ အရသာနှင့် အရသာများကို ခံစားပါ။
သင့်ပန်းကန်များကို အဆီလောင်ကျွမ်းစေသောနည်းလမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ဤနည်းလမ်းများဖြင့်၊ သင်သည် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆီကျစေဖို့အတွက် အားကစားတစ်ခုခုကို ပုံမှန်လုပ်ပါ။ သင်သည်ဤအဆီလောင်ကျွမ်းမှုမဟာမိတ်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးမြှင့်လိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » နေထိုင်စရိတ် » မည်သည့်ပန်းကန်ကိုမဆို အဆီလောင်ကျွမ်းစေမည့် လှည့်ကွက်ကို ရှာဖွေပါ။
Erotophobia သို့မဟုတ် အဖော်နှင့် လိင်ဆက်ဆံရန် ကြောက်ရွံ့ခြင်း။